Baahin: Sabti, May 14, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Galkacyo. Amniga magaalada Galkacyo oo la mahadiyey; Col. Xasaasi, taliyaha hawl-gallada amni ee Galkacyo ayaan waraysanay … Dawlada federaalka ah oo guulo ka sheegatay dagaallo ay isaga hor yimaadeen Al-shabaab & AMISOM oo ugu baaqday shacabka Muqdisho in ay ka guuraan xaafadaha Al-shabaab ka taliyaan … Ciidamada dawladda ee gobolka Gedo oo sheegay in ay qabteen 5 ka mid ah ciidan sahan ah ee Al-shabaab; Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka ayaan waraysanay … Qababqaabada xuska aasaaskii SYL oo ka socda qaar gobollada Somaliya; Indha-guran, wasiirka shaqada & shaqaalaha ee Puntland ayaan waraysanay … – Radio Daljir
Maajo 14, 2011 12:00 b 0
Xaaladda amni ee Galkacyo oo ka soo raynaysa iyo diiwaan-galintii hubka yaryar oo wali socota.
Jaaliyadda Somalida ee Washington D.C. oo xaflad u samaysay waftiga R/wasaare Farmaajo.